ရောဂါကိုတိုက်မှကင်ဆာရောဂါကုသအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များကိုရှေ့ဆောင် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ရောဂါကိုတိုက်မှကင်ဆာရောဂါကုသအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များကိုရှေ့ဆောင်” ဟာရွန်း Siddique ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 9th ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 14.50 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါတရားခွင်, မှာ ကနျြးမာရေးသုတေသနဇီဝဆေးဝါးသုတေသနဌာနများအတွက်အမျိုးသား Institute မှ Guy နှင့်စိန့်သောမတ်စ် '' NHS ဖောင်ဒေးရှင်းယုံကြည်မှုနှင့်ဘုရင့်ကောလိပ်လန်ဒန်မှာ, သူတို့အသိအမှတ်မပြုနှင့်အကျိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒါကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇလူနာ '' သွေးဖြူဆဲလ်တွေပြုပြင်မွမ်းမံပါဝငျ.
အထူးသဖြင့်ကူးစက်သူမြား - - ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏သွေးဖြူဆဲလ်သဘာဝကျကျဆဲလ်တွေဖယ်ရှားပစ်ရန်တပ်ဆင်ထားကြသည်မျှမရှိစေသင့်ကြောင်း, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအသိအမှတ်ပြုရန်ကူညီတိုက်ခိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေလိုအပျ.
သွေးနမူနာကိုသုံးပြီး, အ BRC အဖွဲ့နှစ်ခုအသစ်မျိုးဗီဇမိတ်ဆက်တဲ့အန္တရာယ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာသွေးဖြူဥဆဲလ်တွေကိုကုသဖြစ်ပါတယ်. ဒုတိယအကျိတ်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တိုက်ခိုက်မှသွေးဖြူဆဲလ်နိုင်ပါတယ်စဉ်ပထမဦးဆုံးအမျိုးဗီဇကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူဓာတ်ခွဲခန်း၌မိမိတို့အချိန်ကာလအတွင်းဆဲလ်တွေကြီးထွားဖို့ကို.
ကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးဒေါက်တာယောဟန်က Maher ကပြောပါတယ်: "အများဆုံးကင်ဆာခုနှစ်တွင်, metastasis, ဒါကြောင့်အခြားတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မစတင်ရှိရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကနေရောဂါပြန့်ပွား, သေမင်း၏ commonest အကြောင်းအရင်း. သို့သော်, ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာအများဆုံးဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်သေခြင်းများအတွက်ရောဂါအကောင့်အသစ်များ၏ကြောင့်ဒေသခံပြန့်ပွားသို့မဟုတ်ထပ်မဖြစ်အောင်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်. ဒီကင်ဆာ inoperable ဖြစ်လာနိုင်ပြီးဒီလိုဓာတုကုထုံးသို့မဟုတ် radiotherapy အဖြစ်အစဉ်အလာကုသမှုဖို့တုန့်ပြန်ကျုံ့မကိုဆိုလိုသည်။ "
အဆိုပါကုသမှုဟုခေါ်သည် တစ်ဦး CAR သည် T-ဆဲလ် နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်နှစ်ပတ်ကြာ. သူ့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အသင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိတ်ထဲသို့ CAR သည် T-ဆဲလ်တွေထိုးသွင်းသည်. CAR သည် T-ဆဲလ်ကုသမှုသွေးကင်ဆာအချို့ကိုပုံစံများအတွက်ထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည်ပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်ကဒါခေါ် "အစိုင်အခဲကင်ဆာ" နဲ့လူနာအကျိုးခံစားရဖို့နောက်ထပ်တီထွင်နိုင်သည်, တစ်ဦး discrete ကျိတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းသော, ထိုကဲ့သို့သောဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာအဖြစ်.
Maher အောင်မြင်မှု "အခြားအစိုင်အခဲကင်ဆာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်, ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝအာကာသအတွင်းကိုဖြန့်အထူးသဖြင့်သူတို့အား, ထိုကဲ့သို့သောမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာအဖြစ် (ဝမ်းဗိုက်၏နံရံ) သို့မဟုတ် mesothelioma (အဆုတ်၏နံရံ). က setting ကိုခုနှစ်တွင်, ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်လိုင်သို့လူနာထံမှ CAR သည် T-ဆဲလ်တွေထိုးသွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်စေခြင်းငှါ, ကအများဆုံး "လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိကုသမှုသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်ရန်.
Dr Stephen Caddick, director of innovations at the Wellcome Trust, which co-funded the trial, ကပြောပါတယ်: “By precision engineering immune cells to recognise and destroy tumours, researchers are hopeful that they will be able to improve the prospects for patients who have, အခုချိန်အထိ, faced very limited treatment options.”
← 10 သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမနိုင်သလားသန်းတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေး Quotes သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ်လုပ်ဖို့ခုနစျပါးကြီးသောအမှုတို့ကို →